Iinkonzo zethu-i-Apicmo biochemical producers cdmo
I-APICMO yinkampani yezobisi ejolise kwizixhobo eziphambili zophando olutsha kunye nophuhliso lwe-oncology.
Sinika ukuphuhliswa kwenkqubo kunye nokwenziwa ngokwezifiso.
imveliso emininzi kunye nezinye iinkonzo zophando lweziyobisi kunye namaziko okuphuhlisa kunye nenkampani yezobisi
I-APICMO yeDiscovery Discovery iyisisombululo esisefu, nesisombululo sokuhlalutya ulwazi nolwazi lwezenzululwazi ukubonakalisa ukudibanisa owaziwayo kunye ofihliweyo onokukunceda ukwandisa amathuba okuphumelela kwezesayensi.
Kwiminyaka elishumi edlulileyo, i-APICMO ibonelele ngeenkonzo eziphambili kunye nezokuvelisa iinkonzo. Inqanaba lethu lenkonzo linokuluhlu lwee-milligram ezincinane zeetekki ukuya kwiitoni zeenkonzo ezinkulu zokuvelisa.